Saamaynta ay keeni karto xanibaada adeegyada Dawlada Maraykanka (Dhegayso) – Radio Daljir
Saamaynta ay keeni karto xanibaada adeegyada Dawlada Maraykanka (Dhegayso)
Oktoobar 1, 2013 12:04 g 0
USA, 1-OCT-2013, Subaxnimadii hore ee saaka ayay xirmeen khasnadaha bixiya lacaga ay adeegsato Dawlada Maraykanku kadib markii labada aqal ee Congresska isku fahmi waayeen ansixinta miisaaniyada Dawlada.?
Waxyaabaha ugu waaweyn ee labada gole isku maan dhaafsan yihiin waxaa kamid ah, barnaamijka Caafimaadka ee Obama Care.?
Cabdisalaan Maxamuud Jaamac (Salwe) oo ah Suxufi caan ah sidoo kale ah Khabiir ku takhakhusay horumarinta dhaqaalaha wadamada soo koraya oo u waramay barnaamijka Caawa & Daljir ayaa sheegay in arintani saamaynayso adeegyada aan muhiimka ahayn ee Dawlada Maraykanka.
“Adeegyada muhiimka ah ma taabato arintani, sida gurmadka deg dega ah, Congresska miisaniyadiisana ma taabato lkn waxay saamaysaa adeegyo yaryar oo laftoodu leh saamayn dhaqaale,” ayuu yiri Cabdisalaan Salwe
Md Salwe wuxuu sheegay in arintani haday siisocoto ay keeni karto in dhaqaalihii soo kabanayey ee Maraykanku uu halkiisii ku laabto.
“Sida falan qeeyayaasha dhaqaaluhu tilmaamayaa isbuuca u horeeya saamayn maayo dhaqaalaha guud ee Maraykanka hase ahaatee hadii sii socdo oo 3 todobaad ilaa laba todobaad uu gaadho, dabcan waxaa la hadalhayaa inuu Maraykanka ku celin karo ragaadnimadii dhaqaale oo hada laga soo baxay,” ayuu hadalkiisa raaciyey Cabdisalaan Salwe.
Halkan ka Dhegayso Waraysiga Cabdisalaan Salwe?
Congresska Maraykanka ayaa siweyn isugu khilaafsan meel marinta miisaaniyadda Dawladu ku shaqayso, waxaana arintani dhinaca loo saarayaa in xubnaha Xibiyada Jamhuuriga & Dimuqraadigu siyaasadeeyeen arimaha miisaaniyada Dawlada.
Baahin: Salaasa, 1 Oct, 2013 -Caawa Iyo Daljir Weriye Xaliimo Sacdiya Cabdilaahi Cali~ Daljir ~ Garowe
Garoonka diyaaradaha Buuhoodle oo dhismihiisa laga shiray (Sawiro)